UMotaung uqinisekisa abalandeli | News24
UMotaung uqinisekisa abalandeli
Johannesburg - Usihlalo weKaizer Chiefs uKaizer Motaung useqinisekise abalandeli ngokuthi iqembu lisazoba ngeliqinile nangesizini ezayo nakuba idedele abadlali abanohlonze.
IChiefs imemezele ngoLwesibili ukuthi umqeqeshi uStuart Baxter, Itumeleng Khune, Tefu Mashamaite kanye noMandla Masango bayalishiya leli qembu laseNaturena.
"IKaizer Chiefs ayikaze ibeyiqembu elibambelela empumelelweni edlule futhi sikuhlose ukuthi senze kahle kunangesizini edlule,” kusho uMotaung.
Funda nalolu daba: UKomphela akafuni ukuzihlanganisa namahlebezi
"Ibhola aliwona umdlalo omile futhi lihlale likhona ithuba lokuqhubekela phambili. Ngakho, nakuba abanye babadlali bethu bezohamba, siyakholwa ukuthi abalandeli bethu bazobajabulela abanye abadlali bethu abasha abazobonakala begqoke ijezi eliGold and Black ngesizini ezayo.”
"Sithanda ukubonga abadlali nomqeqeshi [asebesishiya] ngeqhaza labo empumelelweni yethu futhi sizoqinisekisa ukuthi iqembu likulungele ukwenza kahle ngesizini ezayo,” usho kanje, kubika iKickOff.com.
Kenilworth 10:40 AM
Table View 10:32 AM